हाम्राे वास्तविक परिचय | Khabar Dainik
हाम्राे वास्तविक परिचय
वास्तविक हाम्रो परिचय कहाँबाट आउछ ? मानिसले छान्न नपाउने आफ्नो बाबु आमा, जन्म दिन, जन्मेको ठाउँ, आफ्नो मातृभाषा आदि हुन । महा मानव
मानिसले आफ्नो परिचय दिन आफ्नो नाम, परिवारको थर, ठेगाना र कामको विषयमा बताउछ । तर वास्तविक हाम्रो परिचय कहाँबाट आउछ ? मानिसले छान्न नपाउने आफ्नो बाबु आमा, जन्म दिन, जन्मेको ठाउँ, आफ्नो मातृभाषा आदि हुन । तिनै कुराले हाम्रो परिचय बन्दछ । म सानो छँदा,म जन्मेको कारण, मेरै परिवारको पृष्ठभूमिले मैले आदर र सम्मान पाएँ जुन मैले कमाएको होइन, कुमालले जे जस्तो भाँडो पनि बनाउन सक्छ, आदर र अनादरको निम्ति । त्यस्तै गरी मूर्ति बनाउने कालीगरले देवताहरुको कि राक्षसको, कपडा सिलाउनेले महङगो कि सस्तो बनाउन सक्छ तर सबै कुरा बनाउनेकै हातमा हुन्छ । म सानो हुदाका आदर, सम्मान पद सबै एकै चोटी खोसीयो । आदरको शब्द बोल्नेले अनादर गर्न थाल्यो, खुट्टा ढोग्नेले लात्ताले हान्न खोजे, पाउ छुनेले मुखमा थुक्न थाले, भान्सामा म नआउन्जेल भान्सा छुन दिएनन् वा भान्सामा जान दिएनन ।
यसमा मेरो केहि पनि पछुतो थिएन किनभने मैले गरेको विश्वासले मलाई आशिष मात्र होइन तर दुःख र सतावट पनि भोग्न तयार भएँ । मैले विश्वास गरेको हो, विश्वासको कारण इज्जत गयो, जात गयो, पद गयो, काम गयो । जब विश्वास पछि सबैले मलाई बिग्रियो, भडकियो, पागल भयो, इज्जत फाल्यो भन्दथे, तर आज मेरो यहि पृष्ठभूमिको कारण हाम्रै मानिसबाट सतावट हुदा लाग्छ हाम्रो घर यो होइन, हामी यहाँका होइनौं जस्तो लाग्छ ।
एकजना पुरुष र महिलाले आफ्ना जीवन साथी छान्छ र परिवारबाट अलग भएर नयाँ घरबार सुरु गर्दछन्, उसले आफ्नो जीवन साथीबाट असल सहयोगीको रुपमा सहयाता पाउछ र पनि तिनीहरुको मिलाप भएने भने तनाव हुन्छ । अब हामी जहाँ छौं, त्यो हाम्रो परिवार हो जहाँ नता कुनै जातले प्रभाव पार्दछ नता कुनै धर्मले । त्यसैले हाम्रो परिचय दर्शन हाे, बोलावट हाे, क्षमा हो, पश्चाताप हो र हामी स्वर्गीय नागरिक हौं ।